Orinasa zezika voajanahary, mpamatsy - mpanamboatra zezika voajanahary China
Amino Acid Powder dia misy azota organika sy azota anorganika, izay tsy vitan'ny akora ampiasaina amin'ny zezika folio fa azo ampiharina amin'ny voly toy ny zezika rano, zezika ary zezika fototra. Misy loharano roa, ny iray avy amin'ny volom-biby, ny iray avy amin'ny soja.
Zezika organika Lemandou Amino Acid Series dia novokarina tamin'ny fampiasana teknolojia patanty nasionaly. Ny zezika dia mifanaraka tsara amin'ny tany sy ny zava-maniry ankehitriny. Tsy ny singa ihany no ao anatiny, toy ny N, P, K, Ca, Mg, Zn, fa koa ny akora biolojika, asidra amine ary asidra humika. Izy io dia sady manana fihetsika haingana amin'ny zezika simika ary ny zezika zezika lava. Ankoatr'izay, izy io koa dia manana ny fiasan'ny asidra amine sy microelement manokana. Ny zezika dia afaka mampitombo ny vokatra, mampiroborobo ny fambolena ary mampihena ny aretina sy ny bibikely. Izy io dia azo ampiasaina ho zezika ifotony sy fanaovana akanjo ambony. Mifanohitra amin'ny hafa, manana toetra mampiavaka azy izy io.
Ahidrano azo esorina ahidrano dia alaina amin'ny ahidrano ahitra tsy misy fangaro hafa. Miaraka amin'ny otrikaina manankarena tavela, ny ranoka nalaina ahidrano dia karazana anana zezika voajanahary. Izy io dia afaka mamatsy otrikaina isan-karazany ao anatin'izany ny NPK, ny zana-kazo ahidrano, ny singa manara-penitra, ny natiora PGR, sns. Amin'ireny otrikaina ireny, hihatsara ny fakan'ny fotony ary hihatsara ny kalitaon'ny vokatra ary hamboarina 20% farafahakeliny ny vokatra .